Nofoanana tampoka ny cricket tany Nouvelle-Zélande noho ny olana ara-piarovana
Home » Lahatsoratra farany farany » Sports » Nofoanana tampoka ny cricket tany Nouvelle-Zélande noho ny olana ara-piarovana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao • Vaovao • Pakistan Breaking News • People • tompon'andraikitra • Safety • Sports • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Birao Cricket Pakistaney (PCB) dia nilaza fa nofoanana "iray loha" avy amin'ny NZC ilay fitsidihana na dia teo aza ny "fandaminana fiarovana tsy misy dikany" natao ho an'ny andiany, izay nateraky ny lalao Iraisam-pirenena Iray Andro any Rawalpindi sy dimy T20 any amin'ny tanànan'ny atsinanan'i Lahore.
Nitsahatra ny fitsidihana minitra talohan'ny lalao voalohany nataon'ny ekipa New Zealand tany Pakistan tao anatin'ny 18 taona.
Nilaza ny tabilaon'ny cricket Pakistaney sy New Zealand fa nofoanana ny lalao Rawalpindi noho ny fanairana.
Ny praiminisitra Pakistaney Imran Khan dia niresaka tamin'ny mpiara-miasa aminy avy any New Zealand Jacinda Ardern ny zoma mba hanome toky azy ny amin'ny fiarovana ny ekipa.
Ny ekipan'i Nouvelle-Zélande dia tokony handray an'i Pakistan tamin'ny lalao voalohany nataony tany Pakistane nandritra ny 18 taona tao an-tanànan'i Rawalpindi androany, saingy nofoanana io fitsidihana io talohan'ny nanombohan'ny lalao voalohany, noho ny 'ahiahy momba ny filaminana'.
Kianja Cricket Rawalpindi
New Zealand Cricket (NZC) - ny birao nasionalin'ny fanatanjahantena - namoaka fanambarana tsy nampoizina fa nilaza izy fa “nandao” ny fitsangatsanganana noho ny fampandrenesan'ny filaminan'ny governemanta minitra vitsy monja talohan'ny nanombohan'ny lalao.
“Taorian'ny firongatry ny tahan'ny fandrahonan'ny governemanta New Zealand ho an'ny Pakistan, ary toro-hevitra avy amin'ireo mpanolotsaina fiarovana ny NZC eny ifotony, tapaka fa tsy hanohy ny diany ny Black Caps, ”hoy ny fanambaran'ny New Zealand Cricket.
"Vonona ny hanohy ny lalao efa voatendry ny PCB," hoy ny fanambarana PCB. “Na izany aza, ho diso fanantenana ireo mpisava lalao cricket any Pakistan sy manerantany noho ity fisintahana minitra farany ity.”
Ny minisitry ny fampahalalam-baovao ao Pakistan kosa dia nilaza fa ny praiminisitra Pakistaney Imran Khan dia niresaka tamin'ny mpiara-miasa aminy New Zealand Jacinda Ardern ny zoma mba hanome toky azy ny amin'ny fiarovana ny ekipa.
"Fotoana vitsy lasa izay, ny praiminisitra Imran Khan dia nifandray tamin'ny praiminisitra Nouvelle Zélande ary nanome toky azy fa omena fiarovana tsy misy fangarony ao Pakistan ny ekipa New Zealand, ary nilaza ny PCB fa ny ekipan'ny fiarovana any Nouvelle Zélande dia naneho ny fahafaham-pony tamin'ny ny fandrindrana ny filaminana Pakistaney, ”hoy ny minisitry ny fampahalalam-baovao Fawad Chaudhry.
"Ny sampam-pitsikilovana ataonay dia iray amin'ireo rafi-pitsikilovana tsara indrindra manerantany ary araka ny filazan'izy ireo dia tsy miatrika karazana fandrahonana ny ekipan'i Nouvelle-Zélande."
Tao anaty fanambarana iray, ny Lehiben'ny Executive Cricket any New Zealand David White dia nilaza fa tsy azo atao ny manohy ny fitsangatsanganana nomena ny torohevitra momba ny fiarovana nomena azy.
NZC nilaza ihany koa fa efa natao ny fandaminana ny fialan'ny ekipa mpilalao cricket any New Zealand Pakistan.
Ity hetsika ity dia ho hita fa kapoka amin'ny ezaky ny Birao Cricket Pakistan (Pakistan Cricket Board) hitondra ny cricket iraisam-pirenena feno miaraka amin'ny ekipa rehetra hiverina any Pakistan, taorian'ny nanerena ny ekipan'ny firenena hilalao sesitany nandritra ny enin-taona taorian'ny fanafihana tamin'ny ekipa cricket Sri Lanka tamin'ny 2008. Lahore.
Mbola mipetraka ny fanontaniana ankehitriny raha hanohy ny drafitra amin'ny fitsidihany an'i Pakistan amin'ny volana ambony ny ekipa mpilalao cricket any Angletera.